နေရာတကာ ပါချင်တဲ့ စိန်မျောက်မျောက်
ငါးထောင်တန်ကော်ဖီ မသောက်ရလို့ သူစိတ်ကောက်
မကောက်ပါနဲ့မြေးလေးရယ်
ငါ့မြေးလေး ခွပ်လို့ ရအောင်
ရွှေပြည်ကြီးက မျောက်လောင်းလေး လျှော်ထမ်းလို့ပြေး
တိုတဲ့ လျှော်လည်း ရှည် ၊ ရှည်တဲ့လျှော်လည်း ပိုရှည်
အဲ့ဒါ သူ့ ပြည် သူ့ မြေ သူ့ အဖိုး သူ့ အဖွား ပိုင်တဲ့မြေ .
အချိန်တန် အရွယ်ရောက်တော့ စိန်မျောက်မျောက်ဖြစ်လာပေါ့
မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ အကုန်ပေါက်ကရ လုပ်
လုပ်ချင်ရာ အကုန်ဖြစ် ရေကန်အသင့် ကြာအသင့်
မော်ဒယ်ဂဲလ် အသင့် ၊ ဘောပွဲ အသင့် ။
အလှူပွဲမှာလည်းသူပဲ မျောက်ပွဲမှာလည်း သူပဲ
ဘယ်ပွဲမဆို ခပ်ကဲကဲ ၊ အီဒီအာမင်နဲ့ သူ့သားလိုပဲ
လိမ္မော်ရောင် ဆိုင်ကယ်ကြီး ခွကာစီးကြစေဆိုဘဲ
(ဆိုင်ကယ်စီးသော မျောက်မူးလဲ များအကြောင်းသိလိုပါက ဒီနေရာ သို့ သွားဖတ်ကြ ပါရန် )
ဒီအောက်မှာတော့ ဟာသဗီဒီယိုလေး ရှိပါတယ် .. ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဆားချက်မိပါတယ်။။
သူများနိုင်ငံက လူတွေကတော့ သိပ်စိတ်မဆိုးတတ်ကြဘုူးနဲ့တူပါတယ် ..ရယ်ရယ်မောမော နဲ့ပါဘဲ ..
ဒီပုံပါအတိုင်းသာ ရွှေပြည်ကြီးက ပြည်သူ့ အချစ်တော် မျောက်မူးလဲလေး စိန်မျောက်မျောက် တကောင်ကို ဒီလို နေရာမျိုးမှာ ရုတ်တရက် တွေ့ လိုက်ရမည် ဆိုပါက အသင် ဘယ်လို တုန့် ပြန် မိမလည်းလို့....
:kiki : at 9/30/2009 03:30:00 AM
ဒီလိုလူလည်းရှိပါသေးလား လို့အံ့သြသွားရလောက်တဲ့သတင်းလေး တပုဒ်ဖတ်လိုက်ရလို့ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ရွှေနိုင်ငံကြီးက လူငယ် လူရွယ် လူလတ် လူကြီး အားလုံး နီးပါး ၊ အခါအခွင့်သင့်တဲ့အခါ နိုင်ငံခြား ဆိုတာကို စွန့် စားသွားလာ ပြီး နေထိုင် လုပ်ကိုင် ပညာရှာဖွေ ချင်နေကြတယ် ။ အနည်းဆုံးကတော့ ရောက်ဖူး မြင်ဖူးတယ်ရှိအောင် ဆိုပြီး လည်ချင်ကြမှာပါ ။ဘာလို့ ပါလည်း ။
ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာ နေရ ၊ထိုင်ရ၊ စားသောက်ရ ၊ပညာသင်ရ၊ အလုပ်လုပ်ကြရ ၊ တာတွေ အဆင်မပြေကြလို့လား ။ များသောအားဖြင့် ကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါတွေက အဓိက ကြောင်းရင်းတွေ ထဲက အကြောင်းလေး တချို့ ဖြစ်နေကြပြီကိုး။ ( လူတိုင်းကိုတော့ မဆိုလို ပါဘူး ။ အရမ်း ကာရော အဆင်ပြေ ဇိမ်ကျ ဗိုလ်ကျ ၊ ပါးစပ်ကလေးဟပြီး လက်ညိုးလေးညွှန်ရုံနဲ့ အစိမ်းတွေ အနီတွေ အပြာတွေ ချြသေ့င်္တွေ နောင်ဆို ဆင်ဖြူတွေ လှိမ့်ပြီးရ နေကြသူတွေ များ မတော့ ကုတ်နဲ့ ကော်ထုတ်တာတောင် ဘယ်ကိုမှ မသွားလို ကြပါဘူး ၊ ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ်လေးစီးပြီး နိုင်ဂံဂျားကို တပတ်တခါ ရှော့ပင်းထွက်နေနိုင်သူများ အတွက်တော့ ခြွင်းချက် ပေါ့ )။ ဒီတော့ နိုင်ငံခြားထွက် သူ များ တကယ်လို့ကြိုက်ရာရွေးချယ်ခွင့် ရှိတယ် ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံကြီးသို့ သွားလိုပါသလည်း ၊ လို့ဆိုလာခဲ့ ရင် ..... အမေရိကား ... ဆိုတဲ့နိုင်ငံ ကြီးလို့ ဖြေမဲ့သူများ ရာခိုင်နှုန်း အများဆုံး ဖြစ်ကြလိမ့်မယ် ။ ဘာလို့အဲ့ ဒီ နိုင်ငံကို မှ သွားချင် အခြေစိုက် ချင်၊ ပညာသင်ချင် အလုပ်လုပ်ချင်ကြတာလည်း ဆိုရင် ရော ....
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတိုးတက်ဆုံး မို့ လို့။ လူ့ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရလို့ ၊၊ ဒီမိုကရေစီ အပြည့် ရှိလို့၊။ အစရှိသဖြင့် အမျိုးစုံသော အကြောင်းပြချက်တွေ ထွက်လာ ကြမှာပါဘဲ ။ ဒါကလည်း ဘယ်သူ့ ကိုမှ အပြစ်ပြောလို့ မရပါဘူးလေ ။ လူဆိုတာ တိုးတက်ဖို့အားထုတ်နေကြတဲ့သတ္တဝါ တမျိုး မဟုတ်လား ၊ ရှေ့ ဆက်ပြီး အမြင့်ကိုပဲ မြင့်သထက် မြင့်အောင် လှမ်းတက်ချင်သူတွေ ချည်းပါဘဲ ။ သာသည့်မြေသို့ဆိုတာ ကို ဘယ်သူမသွားချင် မရောက်ချင် မနေချင် ရှိပါ့မလဲ ၊ ဒါဆိုရင် အဲ့ ဒီ တိုးတက်ကောင်းမွန် လှတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်း နေထိုင် နေကြတဲ့သူတွေ များ ကရော ၊ ဒိထက် ပိုကောင်းမဲ့ နေရာ ကို မရွှေ့ ပြောင်း မနေထိုင်လိုကြတော့ဘူးတဲ့လား။ရုပ်ဝထ္တုပိုင်းဆိုင်ရာ အနေနဲ့ ကြည့်ရင် သူတို့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ပြီးပြည့်စုံအောင်ကြွယ်ဝနေကြပေမဲ့ သူတို့ နိူင်ငံသားအားလုံး လည်း တန်းတူ ခံစားနိုင်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ဆင်းရဲ နဲ့ချမ်းသာ ဆိုတာ နေရာတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိနေကြတာဘဲ မဟုတ်လား ။ ဒီ့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရော ....၊ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုတော့ စိတ်ဓါတ် ကောင်းမွန် ပြည့်ဝသူများ ရှိသလို ၊ သေးသိမ်ညံ့ဖျင်း ကောက်ကျစ်ကြသူတွေ လည်း နေရာတိုင်း၊ လူမျိ်ုးတိုင်း ၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိနေကြတာပါဘဲ ။
ဒီတော့ ဒီလို နိုင်ငံကြီးတွေမှာ နေထိုင်ကြသူ နိုင်ငံကြီးသား ဆိုသူတွေ တချို့ တလေ မှာ ရှိနေကြတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုတလောမှာ ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းလေး တွေ အပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ကြားရ နားဝ မချမ်းသာ ဆိုသလို ပြောပြချင်လာတယ် ။
တခုက ဒီ နိူင်ငံမှာ တွေ့ လိုက်ရတဲ့ ယနေ့ ထုတ် သတင်းစာပါ အကြောင်းအရာလေးပါ ။ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိ ဂျက်ဖ် လို့အမည်ရတဲ့ အမေရိကန် လူမျိုး တဦးဟာ ဒီနှစ်ဦးပိုင်းမှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် တဦးအနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွင်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ပါတယ် ။ လည်ပတ်ရင်းနဲ့ ဘယ်လိုက ဘယ်လို တွေ့ကြ သိကြသလည်း မပြောတတ် ၊ တက္ကသိုလ် တခုက ဆရာမတယောက်နဲ့ သိကျွမ်းပြီး ရင်းနှီးသွားတယ် တဲ့ ။ ပြီးတော့ ခေတ်မှီလွတ်လပ်တယ် လို့ အမည်တပ်ပြီး ဗရမ်းဗတာ လူ့ အသိုင်းအဝန်းတို့ ထုံးစံ အတိုင်း လက်မထပ် အတူနေ ( living together ) လိုက်ကြတယ်ပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့ဗီဇာ သက်တမ်းကုန်ပေမဲ့ သကောင့်သား ကိုရွှေဂျက်ဖ် က သူ့ တိုင်းပြည် သူ မပြန်ဘဲ အို ( over stay ) အဖြစ်နဲ့ အဲ့ဒီ ဆရာမ ထမိန်နား ( အဲလေ..ဒီမှာက ထမိန် မဝတ်ကြတော့ စကပ်ပေါ့ )စကပ်နား ခိုစား ပြီး စည်းစိမ်ကျ နေခဲ့တယ် ။ ဒီမှာ ကလည်း အပြစ်တစုံတခုသာ မလုပ်ရင် ဘယ်သူမှ လိုက်ပြီးစစ်လား ဆေးလားမရှိဘူးဆိုတော့ သူ့ အဖို့အခွင့်ကောင်းပဲပေါ့ ။ မျက်နှာဖြူ နိုင်ငံခြားသား ဆိုပြီးတော့ လည်း ဒီနိုင်ငံက လူတွေ က အလကားနေရင်းထိုင်ရင်း စွတ် အထင်ကြီးနေ တတ်ကြတာတွေလည်း အများကြီး ရှိတာပေါ့ လေ။
ပေးသူ ယူသူ လွန်ကြည်ဖြူ ၊ အပေးအယူ မျှနေတဲ့ အချိန်တွေတုံးက ဘာမှ မဖြစ် လျှောလျှောလျှုလျှူ နေလာလိုက်ကြတာ မနေ့က မှ အခန့်မသင့်ကြလို့ခွန်းကြီးခွန်းငယ် စကားများ ရန်ဖြစ်ကြပါလေရော ။ ဒီတော့မှ အဲဒီ ဆရာမ က ကိုရွှေဂျက်ဖ် ကို သူ့ရှိသမျှ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း အိတ် ၄ လုံး နဲ့ ရဲစခန်းကို ခေါ်လာပြီး အမှု လာဖွင့် ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလူ " ကိုရွှေအမေရိကန်ကြီး" အိုဗာစတေး နေ ပါတယ် တဲ့ ၊ လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါတဲ့ လေ ။ ပြီးတော့ ဘာမှ လှည့်မကြည့်တော့ဘဲ ပြန်သွားပါတယ် တဲ့ ။ ဒီမှာတင် ကိုရွှေဂျက်ဖ် တယောက် ဘိုလို ရေရွတ် ဆဲဆိုပြီး ရဲစခန်းထဲမှာ စတင်သောင်းကျန်းပါတော့တယ် ။ ဒီနိုင်ငံ မှာ ဘာလူ့ အခွင့်အရေး ရှိတာ မှန်လို့လည်း တဲ့ ။ သူ ဘာအပြစ်မှ မလုပ်ပဲ မတရား ချုပ်နှောင်ထား ပါတယ်တဲ့ ၊ ပြီးတော့ သူ့ အိတ် ထဲက ဗီဒီယို ကင်မရာနဲ့ ရဲတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပုံတွေ ရိုက်ပြီးပြောနေပါသေးတယ်တဲ့ ။ ဒီဆရာမ က သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ခုလို ဆွဲချ လာတာ ဟာ မတရားပါဘူးတဲ့ ၊ ရဲတွေ နဲ့ပူးပေါင်းပြီး သူ့ လို နိုင်ငံခြားသား တယောက်ကို အနိုင်ကျင့်နေတာပါတဲ့လေ ။ ကိုရွှေရဲ တို့ ခမျာ မလည်း ငိုရခက် ရယ်ရခက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ သူ့ ကို ဥပဒေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရ ပါသတဲ့လေ ....( ရွှေတွေသာ အို နေတတ်ကြတာ မဟုတ်ဖူးနော် .. အမေရိကား က လူတွေလည်း သူများ တိုင်းပြည်တွေဆီသွားပြီး အိုနေတတ်ကြပါသေးရဲ့ ။အဖေါ် ရပြီပေါ့ )
စဉ်းစားကြည့် တော့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး မှာတာဝန်ရှိတယ် လို့ ထင်တယ် ။ နိုင်ငံခြားသား ဆိုတိုင်း အထင်ကြီးတတ်တဲ့သူတွေထဲ မှာ တက္ကသိုလ်နည်းပြဆရာမ ..တဲ့ ။ သူသင်ထားတဲ့ပညာတွေ ၊ အတွေးအခေါ်တွေ က ဘယ်လိုလည်း ၊ ဘယ်မှာလည်း ။ဘာလုပ်ဖို့ လည်း ။ခုတွေ့ခုကြိုက် ခုအတူနေကြ မကြိုက်ရင် အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဖြစ်ကြ တဲ့ လူ့ အတန်းအစား ။ ဦးနှောက်နဲ့မစဉ်းစား ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ လူတန်းစားထဲ ထဲ့ သွင်း သတ်မှတ်ရတော့ မယ်ပေါ့ ။ ဟို တဖက်က နိုင်ငံကြီးသား ဆိုသူကရော ... သူ့ နိုင်ငံ အတွင်းမှာ အခြေတကျ အခြေမခိုင်လို့။ လုပ်ကိုင် စားသောက် မရလို့ ဒါမှမဟုတ် ရေသာခို အချောင်လိုက်ချင်လို့ ၊ ဒီလို ကမ္ဘာလှည့် ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မြှူစား ခြူစား တဲ့လူအမျိုးအစားလား ။ လူ အမျိုးမျိုး စိတ် အထွေထွေပေါ့နော် ။ မြန်မာဆိုတိုင်းလည်း အထင်မသေးလိုက်ကြပါနဲ့။မျက်နှာဖြူ ဆိုတိုင်းလည်း နေရင်းထိုင်ရင်း အထင် ကြီး စရာမလိုပါဘူး ။
ကိုရွှေဂျက်ဖ် တယောက် ရဲစခန်းထဲမှာ သူခိုးလူဟစ် နဲ့ပြောနေတာ ...ဒီထိုင်ဝမ် သူ နဲ့ ရဲတွေ ပေါင်းပြီး သူ့ ကို မတရား ဝိုင်းပြီး အနိုင်ကျင့်ကြပါတယ် တဲ့..သူကပဲ ပြန်ပြီး ရဲတွေကို မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယို ရိုက် နေပါသေးတယ်တဲ့
ကိုရွှေရဲ ခမျာ ဘာပြောရ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ..မျက်နှာလေး တဖက်လှည့်လို့အခက်တွေ့နေရပြီ ။
( ရွှေပြည်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ ဒီဂတုံးတယောက် မလွယ်ဘူးနော် ။ ကင်မရာပဲ ဆုံးမလား ။ နောက်ထပ် ဦး ယက်တော တဇာတ်လမ်း ဖြစ်မလား ပဲ )
ဒီ အကြောင်းလေး ကို အော်ရီဂျင်နယ် ဖတ်ချင်ရင် ဒီမှာ ရှိပါတယ်
နောက်ထပ် အကြောင်းအရာ တမျိုး ကတော့ ခုတလော အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဂယက်ရိုက်နေတဲ့ Apple ကုမ္ပဏီ က သူ့ ထုတ်ကုန်ကြော်ငြာ နဲ့ပတ်သက် တဲ့ အရာ လေးပါ ။ ခုလောက်ဆို စာဖတ်နေသူ လည်း သိပြီး ကြားပြီး ဖြစ်မှာပါ ။
ဲJon Ive ဆိုသူ ရူးကြောင်ကြောင် ဒီဇိုင်နာ နဲ့ ဆန်းတာထွင်တယ် လို့ နာမယ်ကြီးသွားတိုင်း ထင်ရာစိုင်းလိုက်တဲ့ နာမယ်ကြီး ပန်းသီး တို့ဟာ သူတို့အကျိုး စီးပွား နဲ့နာမယ် တခုတည်း ကိုသာ ရှေးရှုလို့ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တို့ ရဲ့အထွဋ္ဋ်အမြတ် ဗုဒ္ဒဘုရားရှင် ကို လူသိရှင်ကြား စော်ကား လိုက်တဲ့ ကြော်ငြာ တခု ကြောင့် အတော်လေးကို စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်မိရပါတယ် ။ လူပီသရင် ကျုးလွန်မိတဲ့အမှားအတွက် သတ္တိ ရှိရှိ နဲ့မှားတယ်ဝန်ခံရဲ ပြီး၊ စော်ကားမှု အတွက် ဝန်ချတောင်းပန်သင့်ပါတယ် ။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မသိသေးသူများ သိလိုပါက ဒီနေရာ မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ် ။
ဒါလေးတွေ က လူတွေ ထဲက လူတွေ အကြောင်း ကိုယ့်အမြင် တစေ့တစောင်းလေးပါ ။ နောင်လည်း ထင်ရာ မြင်ရာလေးများကို ထင်သလို မြင်သလို ရေးပါအုံးမယ်။
:kiki : at 9/28/2009 11:30:00 PM
ကဲ ...ကြည့်ရတာလည်း မျက်စိညောင်းလောက်ပါပြီ ။ အမြင်တွေ ဝါးနေလောက်ပါပြီ ။အစိမ်း ၊အနီ၊ အဝါ ရောင်တွေ ရောနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ သင့် လျှော်မဲ့ အရောင် ကို သေသေချာချာ မှန်ကန်စွာ ကြည့်မြင်နိုင်ကြပါစေ ။ကြည့် ရတာလည်း မျက်စိညောင်းလောက်ပါပြီ ။ အမြင်တွေ ဝါးနေလောက်ပါပြီ ။အစိမ်း ၊အနီ၊ အဝါ ရောင်တွေ ရေှာော သေသေချာချာ မှန်ကန်စွာ ကြည့်မြင်နိုင်ကြပါစေ။
:kiki : at 9/26/2009 03:15:00 PM
တီ တာတီ ... တွင် တွင် .. ( ဖုံးသံလွင်လွင် မြည်နေပြီ)
"သားလေး မြတ်နိုးရေ မေမေ ထမင်းပွဲ အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးပြီ ။တဖက်ခန်းက ညီမလေး ခေါ်ပြီး ဆင်းလာ ကြတော့နော် ။"
" ဟာ မေကြီးကလည်း သား ဂိမ်းဆော့နေတာ လယ်ဗယ် ၂၀ ခုမှ တက်တာ .. လက်မအားဖူး . ဗိုက်လဲ ဆာသေးဘုး ခုနကမှ မက်ဒေါ်နယ် စားထားတာ .မေကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ် ပဲ ဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်တော့ "
ခင်ကလျှာ နုနုထွဋ် တယောက် ၆ တန်းကျောင်းသားလေး သားတော်မောင် မြတ်နိုးကို စားတော်ခေါ်ဖို့ပြောမရ တော့ ၄ တန်းကျောင်းသူ ချစ်မငြီး သမီးထွေးလေး တွယ်တာ ဆီ ဆက်ရပြန်သည် ၊
တီ တီ တီ .. လိုင်းအင်ဂေ့ရှ် အသံ သာ ကြားရပြန်သည် ။
ခက်တာပဲ ဒီကလေး နှစ်ယောက် နဲ့ တော့၊ သမီးငယ်လေးကလည်း သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တချိန်လုံးဖုံးပြော နေတာ ခုတောင် အမျှင်မပြတ်သေးပါလား ။ သူ့အိုင်ဖုံး လေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်သွားပြန်ပါပြီ ။
အိမ်ရှေ့ မြက်ခင်းပေါ်တွင် ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်နေသော လင်တော်မောင် မိုးထက်အောင်ဟိန်း တယောက်ကလည်း အသီးအနှံထဲတွင် အကြိုက်ဆုံး မှာ ဂေါက်သီး ဟု ဆိုရလောက်အောင်ကို တဂေါက်ထဲ ဂေါက်နေပြန်တော့ အပြင် ကလပ်တွေမှာ မြာသွားပွေ ၊ ကဲနေတာထက်စာလျှင်မျက်စိအောက်မှာ ဂေါက်စွဲ နေတာကမှ တော်သေးရဲ့ လို့ သဘောထား ခွင့်လွှတ်ထားရသည်ပေါ့ ။
ထမင်းဟင်းဆိုရင် ပူပူနွေးနွေးမှ စားတတ်တဲ့ချစ်ဒါလင် အတွက် ချက်ပြီး ပြုတ်ပြီးတာနဲ့စားတော်တည်နိုင်ဖို့ပင့်ဖိတ်ရအုံးမည် ။ ထမင်းစားခန်းထဲမှ လှမ်းမြင်နေရသော သူ့ ယောကျာင်္းကို ခေါ်ဖို့အိုင်ဖုံး လေးကို နှိပ်ရပြန်သည် ..
"မောင်ရေ ..ထမင်းစားဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီ နော် ။ သားနဲ့ သမီးတို့ ကို ခင်ခေါ်တာ မရဘူး ။ မောင်ဖုံးဆက်ပြီး ခေါ်ကြည့်ပါအုံး ။ တနင်္ဂနွေ တရက်ပဲ မိသားစု စုံစုံလင်လင် အတူစားကြရအောင် ။ မောင်ကြိုက်တတ်တဲ့ ဂဏန်းချဉ်စပ်လေးချက်ထားတယ် နော် "
ဪ .. ကြည့် လိုက်ကြပါအုံး ..သူတို့ မိသားတစု ဒီအိမ်လေး ထဲမှာ ဟိုနဲ့ ဒီနဲ့အော်ပြောလိုက်ရင် ရနေသား နဲ့..ဟန်းဖုံး ကိုယ်စီ ကိုင်ပြီး ၊ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလေး တခွန်းပြောဖို့တရက်မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆက်နေကြတဲ့ ဖုံး တွေ .. ဖုံးတွေ ။ အင်းလေ ၊ ဆက်နိုင်ကြပေ မပေါ့ ။
ဖုံးတလုံး တန်ဖိုးကလည်း ဘယ်လောက်မှ မရှိ ၊ပြောခ ကလည်း သက်သာ ၊ အချိန်မရွေး လိုင်းသွားလျှောက် ။ ဖုံး ကုမ္ပဏီ လိုင်းတူတူ ဆိုရင် အလကား ပြောလို့ ရတာလည်း ရှိသေး ။ ဖုံးခ သွင်းရတာလည်း နေရာတိုင်းလိုလို မှာရှိနေတဲ့ 7-Eleven တို့ ,OK တို့ Family Mart တို့လို အစုံရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ၂၄ နာရီ ပေးသွင်းလို့ ရနေတာဘဲ ဟာ ။
3 G ဖုံးလေးနဲ့ဆို သမီးရည်းစားတွေ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ကာ အကြည်ဆိုက် နေလည်း ရသေး။ဒီလို တနင်္ဂနွေ အားရက်လေးကို ခင်ကလျှာ နုနုထွဋ် တယောက် သူ ချစ်သောမိသားစုလေးနှင့် အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည် ။
ဒီကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာ အခြေချ လာရောက်နေထိုင်ပြီးကတည်းက ဒီ ဆယ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း သူ့ ဘဝလေး အေးချမ်းသာယာ နေခဲ့ ရသည် ။ဒါပေမဲ့ရွှေပြည်ကြီးမှာ ကျန်နေခဲ့ တဲ့သူ့ မိဘများဆီ သာကြောင်း မာကြောင်း သတင်းများ မေးဖို့ ရန် ဖုံးဆက်လိုက်တိုင်းမတော့ ကြည်လင်နေသော စိတ်အစဉ်မှာ အမြဲတမ်း အလိုမကျ ရင်တမမ ဖြစ်ခဲ့ ရပေတော့သည်။ ဘာကြောင့်များပါလိမ့် ။
ဖုံးခေါ်လိုက်တိုင်း "တီ..တီ..တီ..လူဂျီးမြင်း ခေါ်ဆိုနေသော ဖုံးမှာ ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာ ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍ မရနိုင်ပါရှင် "
" လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော ဖုံး မှာ ၊ဖုံး ပိတ်ထားပါသဖြင့် နောက်မှ ခေါ်ဆိုပါရှင် "ခက်တော့ တာပါဘဲ ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖုံးခေါ်ခ ဈေးအကြီးဆုံး နိုင်ငံထဲတွင် ဂုဏ်ယူ ဝံ့ကြွားစွာ နေရာယူ ထားသော အမိရွှေ နိူင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု မှာ ဒီလို ဒီလို ယဥိကျေးသိမ်မွေ့ စွာ ဖြေကြားနေသူ လေးကြောင့် တဖက်က ဖုံးခေါ်သူခမျာ စကား တလုံး မှ မပြောလိုက်ရသေးခင်မှာပဲ ဖုံးကပ်တွေ တကပ်ပြီး တကပ် ကုန်ပါလေရောလား ။
ဒီဖုံးတကပ် နဲ့ အမေရိကန် ၊ဒါမှ မဟုတ် ပြည်မကြီး က သူငယ်ချင်းတွေဆီ အလ္လာပ သလ္လာပ ပြောရင် ၆ နာရီကြာ ပြောလို့ရတာ ။ရွှေပြည်ကြီးသို့ ဆက်လို့ကံကောင်းထောက်မစွာ ဖြင့် စကားပြောလိုက် ရရင်တောင် မိနစ် ၂၀ ပဲ ခံပါသည်တဲ့ ။ဒီတော့ လည်းလေ ဒီတော့ လည်းပေါ့ ။
ခင်ကလျှာ နုနုထွဋ္ဋ်တယောက် ရွှေပြည်ကြီးသို့ဖုံးတခေါက်ဆက်ဖို့အရေး အထပ်ထပ် အခါခါတွေး နေရသည်ပဲပေါ့ ။ဒီလိုဆိုတော့ ရွှေပြည်က လူတွေ ဖက်က ကြည့် ပေးကြ ပြန်ပါအုံးလေ ။ သူတို့ တတွေ ဒုက္ခကမှ တကဲ့ ဒုက္ခကြီးပါလား လို့ ကွယ် ။
၂၁ ရာစုထဲံမှာ လူတိုင်း လူတိုင်း ဖုံးတလုံးကိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အထဲမှာ ရွှေပြည်က လူတွေ ကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ကြတယ်နော် ။မကိုင်လို့ မဖြစ် အရေးအကြောင်း ရှိရင် ဆက်သွယ်ရအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ရှိစုမဲ့ စုလေး ခြစ်ချုပ်ပြီး ဝယ်ထား ၊ သုံးနေကြရသူ အများရဲ့ဒုက္ခ တွေ ကလည်း မသေးလှပါတကား ။
အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီလိုပေါ့ အပေါင်းအသင်းတို့ ရေ
တယ်လီဖုန်းဘီလ်ကိစ္စ ပြည်သူများ အခက်အခဲကြုံ
အောင်ကျော်မိုး/ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉
နအဖစစ်အစိုးရက ၀န်ဆောင်မှုများ အပြည့်အ၀မပေးနိုင်ဘဲ ၎င်းတို့တောင်းခံထားသည့် တယ်လီဖုန်းကြိုတင်ငွေများ အချိန်မီမပေးသွင်းနိုင်သူများကို ဖုန်းလိုင်းများဖြတ်တောက်နေသဖြင့် ပြည်သူများ အခက်ကြုံနေကြသည်။
စစ်အစိုးရ စာတိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် ကြိုးဖုန်းသုံးစွဲသူ အားလုံးကို (၃) လစာ ကြိုတင်ငွေ ပေးသွင်းရန်နှင့် ပျက်ကွက်ပါက တယ်လီဖုန်းလိုင်း ဖြတ်တောက်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဆက်သွယ်ရေးရုံး ငွေစာရင်းဌာနတွင် ငွေသွားသွင်းသူတဦးက “ကျမက တလကို ပုံမှန် ကျပ် (၆) သောင်းလောက်တော့ ဘီလ်ဆောင်ရတယ်။ ခု (၃) လစာ တယ်လီဖုန်းကြိုတင်ခွန် (၂) သိန်းခွဲ ဆောင်ပါဆိုပြီး ပြောတယ်။ ငွေပမာဏကများတော့ စုနေတာနဲ့ ချက်ချင်းမဆောင်ဖြစ်ဘူး။ ခုတော့ တယ်လီဖုန်းလိုင်း အဖြတ်ခံလိုက်ရပြီ။ ခု ဒီရုံးမှာ ငွေလာဆောင်တော့လည်း လူတွေက အရမ်းတိုးကြပ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြီးခဲ့သည့်မတ်လမှစ၍ အသစ်ထုတ်ပေးသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် ကြိုးဖုန်းအားလုံးအတွက် ကြိုတင်ဖုန်းဆက်သွယ်ခ ငွေကျပ် (၅) သောင်းစီ ကောက်ခံခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းအသုံးပြုနေသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းအားလုံးကို နောက်ဆုံးသုံးခဲ့သည့် (၃) လစာနှင့် ညီမျှသည့် ကြိုတင်ငွေ ပေးသွင်းရန်၊ မပေးသွင်းပါက လိုင်းဆက်သွယ်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုထပ်မံ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုလာသည့် တနိုင်ငံလုံးရှိ ကြိုးဖုန်းများကိုလည်း ကြိုတင်ငွေ (၃) လစာပေးသွင်းရန်၊ မပေးသွင်းပါက လိုင်းဖြတ်တောက်မည်ဟု ကြေညာပြီး အမှန်တကယ် လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း ငွေသွင်းမည့်သူ တဦးကလည်း “ကျနော်တို့က ဖုန်းဝယ်ထားပြီးကတည်းက ငွေ (၅) သောင်း ကြိုတင်သွင်းရတယ်။ ခု ဖုန်းအဖြတ်ခံလိုက်ရတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ဒီရုံးကို လာစုံစမ်းတော့ ဖုံးနံပါတ် (၃) ခု ပေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) ရက်က အဲဒီနံပါတ်ကို တနေ့လုံးဆက်တယ်။ အမြဲတမ်း ဖုန်းလိုင်းမအားဘူးကြီးပဲ ဖြေနေတယ်။ ဒါနဲ့ မနေ့က ကြိုတင်ငွေ (၅) သောင်း ထပ်လာသွင်းလိုက်တယ်။ ဒါလည်း ဖုန်းလိုင်း ပြန်ပွင့်မလာသေးဘူး။ အဲဒါ ငွေစာရင်းဌာနကို အချိန်ကုန်ခံပြီး သွားစုံစမ်းတော့ နိုင်ငံခြားကို ဆက်ထားတာ အက်ဖ်အီးစီ (၃) ဒေါ်လာဖိုး ပေးစရာရှိလို့ ပိတ်လိုက်တာလို့ ပြောတယ်။ ခု အက်ဖ်အီးစီကို မှောင်ခိုဈေးမှာ သွားဝယ်ပြီး ငွေပြန်လာဆောင်ရဦးမယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ တပြိုင်တည်း လိုင်းဖြတ်တောက်မှုကြောင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း ငွေစာရင်းဌာနရုံးတွင် ငွေသွင်းသူများ နေ့စဉ် ကြပ်ပိတ်နေပြီး အချို့ နံနက်မှ ညနေအထိ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းကြရကာ အချို့မှာမူ ဝန်ထမ်းများနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ လုပ်ထားသည့် ပွဲစားများကို တယ်လီဖုန်းစာအုပ် တအုပ် ငွေကျပ် (၁) ထောင်ပေးပြီး အမြန်ငွေသွင်းကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံး နိုင်ငံများထဲမှ တနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု အညံ့ဖျင်းဆုံး နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။
သတင်းအပိုချပ်လေးလည်း ရှိပါသေး ... ဆက်လက်ရှုစားတော်မူကြပါကုန်
အို..... ဘယ်သူ ဘာတွေပြော နေကြတာလည်း ။ ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးက ငွေစက္ကူတွေ ကို စုတ်ပြတ်သလေး ၊ ညစ်ပတ်သလေး နဲ့၊ ။ ကဲ ... ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှတာ ရိုက်ထုတ်လိုက် မကွဲ့.. လာလေရော့ ၅၀၀၀ ကျပ်တန် ။
ငါ့ သားသမီး မြေး မြစ်တွေ ပျော်ပျော်ကြီးသာ သုံးကြပေရော့ ။ ဆာလာအိတ်တွေ ဂုံနီအိတ်တွေ နဲ့မနိုင် မနင်း မ ပြီး ငွေတွေ ချေနေကြရ တဲ့၊အရောင်းအဝယ် ကိစ္စ တွေမှာ အချိန်ကုန် လူပန်း သက်သာအောင် ဘဘကြီးများက စီစဉ် ပေးလိုက် ပါပြီတဲ့ ။
တိန် တိန် တိန်....
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 20 နာရီ 00 မိနစ်
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ငါးထောင်ကျပ်တန် ငွေစက္ကူသစ်များ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဝေတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း
မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားက ယနေ့ည သတင်းတွင် ကြေညာသွားသည်။
ဒီမှာ အပြည့်အစုံ ရှိတယ်နော်
ဘာများပြောချင်ကြပါသေးသလည်း ပရိဿတ်ကြီးတို့.....
ဒီပုံလေးပေးသွားတဲ့ မမိုမိဂျိစံ ကို စိန်မျောက်မျောက်မှ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။။။ ခွှီး ခွှီးးးး
:kiki : at 9/25/2009 12:06:00 PM
ကျုပ်ကတော့ အသက်လည်းကြီးလာပါပြီ ။ ဘဝနေဝင်ချိန်ရောက်တော့မှာ ဆိုတော့ နောက်ဘဝအတွက်ပါမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု များလည်း ဆက်လုပ်နေခဲ့ တယ် ။ဒီကောင်တွေကတော့ ဆက်ပြီး မိုက်လုံးကြီး နေတော့တာ ။တရားမရှိသေးဘူး တဲ့ ဗျာ ။တနေ့ထမင်း ၃ နပ်ပဲ စားကြတာ ။ ဘယ်လောက်မှလည်းပိုမစားနိုင်ကြပါဘူး ။ တဝမ်းတခါး ဝရင် တော်ပြီပေါ့ ။ ထမင်းနပ်မှန်အောင် မစားရတဲ့သူတွေ ကျုပ်တို့ ပြည်မှာ ဘယ်လောက်ရှိနေ ကြလည်း ၊ လူတွေ ဘယ်လောက် ငတ်နေကြလည်း ဆိုတာ တွေ ဘာလို့များ မတွေးမိတာလည်း ဗျ ။ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရော ဆိုတဲ့ကောင်တွေကြောင့် ကျုပ်တို့ စစ်သားတွေ သိက္ခာကျ ရတယ် ။ အရွံအမုန်းခံကြရတယ်။ ငခုံးမတကောင်ကြောင့် တလှေလုံးပုပ်ကြရတယ် ဗျာ ။
စစ်သား ဆိုလို့လူတွေ ကြားရုံ နဲ့ ၊ မြင်ယုံနဲ့ တင် အော့နှလုံးနာ ကုန်ကြပြီ ၊ အရင် က တပ် နဲ့ပြည်သူ တွေကြားမှာ ရှိခဲ့ ကြတဲ့ လေးစားမှု ၊အားကိုးမှု ဆိုတာတွေလည်း ရှာ မတွေ့ နိုင်တော့ဘူး ။ ကျုပ်ဘဝ ခုနေချိန်မှာ အမြင်ချင်ဆုံးအရာ က အဲ့ဒီ ဟာတွေ ပျောက်ပျက်စေချင်တာ ပါဘဲ ။ အရင်လို တပ်နှင့် ပြည်သူ လွန်ကြည်ဖြူ ဆိုတာတွေ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေတယ်ဗျ ။
၁၉၉၅ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့။
ဒီနေ့ ကိုတော့ ကျုပ်တသက် လုံး မမေ့နိုင်တော့ပါဘူး ။ အဲဒီနေ့ မတိုင်ခင်ရက်တွေ ကျုပ် အတော်လေး ပင်ပန်းခဲ့ရတာဗျ ၊၊မထွက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာ ခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြား ဆိုတာ ကို ထွက်ဖို့၊ နှစ်အတော်ကြာ ကွဲကွာနေတဲ့ကျုပ်သမီးလေးဆီ သွားတွေ့ ဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိစ္စတွေ လိုက်လုပ်နေရတာ စိတ်ရော လူရော အတော်မောပါ့ ။ ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ခက်တာဘဲ ။ မိန်းမက ပြောပါတယ် ။ ပွဲစားလက်ထဲ အပ်လိုက်ပါတဲ့။ ပိုက်ဆံ နဲနဲ ပိုပေးလိုက်ရင် ဒီလောက် မပင်ပန်းဖူးပေါ့တဲ့။ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ရဲ့သား နဲ့ဒီလို အပိုတွေ ကုန်မဲ့ ကိစ္စ ဆို နှမြောတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဘဲ အစ အဆုံးလိုက်လုပ်တာ ။ လဖက်ရည်ဘိုး နေရင်းထိုင်ရင်း တောင်းတဲ့ ကောင်မျိုး နဲ့ တွေ့ တော့ စိတ်တို ရသေးတယ် ။ ဒီစာရွက်လိုလို့ ၊ ဟိုထောက်ခံစာ လိုလို့ နဲ့ တနေရာတည်း ကိစ္စတခုတည်းကို အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပြေးရသေးတယ် ။ တန်းစီ ရ၊ စောင့်ရ နဲ့ ဘဲ မြန်မာပြည်က လူတွေ ရဲ့တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ကြရတာပေါ့ ။ ဒီလို နဲ့ဘဲ နောက်ဆုံးတော့လည်း ပတ်စ်ပို့ ဆိုတာကြီး ကျုပ်လက်ထဲ ရတဲ့ နေ့ ပေါ့ ဗျ ။
ကျုပ်အတော်ကျေနပ်မိတယ် ။ ပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်တယ်ပေါ့ဗျာ ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ကျုပ်ရဲ့ ပြောမနာဆိုမနာ ဘဝတူ သူငယ်ချင်း တပ်ထွက် က ပြောဖူးတယ် ။" ဟေ့ကောင် မင်းပတ်စ်ပို့ က လျှောက်လို့ကျလာမှာ မဟုတ်ဖူး ။ပင်ပန်းခံပြီးလုပ်မနေနဲ့ကွ " တဲ့ ။ သူပြောတာလည်း ဟုတ်ပါတယ် ။ ကျုပ်တို့ လို ရာဇဝင်ရှိတဲ့ကောင်တွေ ထွက်ဖို့ ကိစ္စက တကယ် မလွယ်တာ ဗျိုး ။ ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဖြစ်တယ် မသိပါဘူး ။ ကျုပ်ကဘဲ ကံကောင်းချင်တာလား ၊ ကံဆိုးချင်တာလား ။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် လည်း မသိမိခဲ့ဘူး ။
ဒါနဲ့ကျုပ်သူငယ်ချင်းကို ဒီအကြောင်း ပြောဖို့ထွက်လာခဲ့တယ် ။ နေကလည်းပူပါ့ ။ ပြောချင်နေတော့လည်း နေပူတာလည်းဂရုမစိုက် ။ ကျုပ်မိန်းမက ပြောပါသေးတယ် ။ ရှင် အသက်လည်းကြီးပြီ ၊ ဒီနေ့ တနေ့ လုံး ပင်ပန်းလာတာ ခဏတဖြုတ် နားအုံး ၊ နေစောင်းမှ သွားပေါ့ ဆိုတာလည်း နားမထောင်ခဲ့ ဘူး ။ ဓါတ်ဆီချွေတာရေး အတွက် ဆိုင်ကယ်စုတ်လေး နဲ့ အိမ်က တခါ ထပ်ထွက်ခဲ့တယ် ။ မွန်းတဲ့ချိန်ကျော်လို့၃ နာရီ ခွဲနေပြီ ။ နေကတော့ အတော်ရှိန်နေသေးတာ ။ မနက်တည်းက ခေါင်းနဲနဲ ကိုက်နေတာ လည်း ဂရုမစိုက်အားဖူးဗျ ။ ကျုပ်က နှလုံးရောဂါ အခံရှိနေတာ ခုတလော ဆေးကို မှန်မှန် မသောက်ဖြစ်ဖူး ။ဆရာဝန်ကတော့ ပြောပါတယ် ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့။ အဆီ ၊ အငံတွေ မစားဖို့။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်တွေ ချက်ပေးတာ မကြိုက်တာနဲ့ မနေ့ က ဒီကိစ္စတွေလုပ်ရင်း မိန်းမ မသိအောင် အပြင်မှာ ဝက်ခြေထောက်စွတ်ပြုတ် သောက်လိုက်သေးတယ်။ ။ အဲဒီ အရှိန်တွေလား မပြောတတ်ဖူးဗျ ။ ဆိုင်ကယ်စီးရင် လမ်းတဝက် ကျတော့ ရင်ထဲ ကြပ်တပ်တပ် ၊ အသက်ရှူ မဝတော့ဘူး ။ ချွေးစေးတွေ ပြန်ပြီး ခေါင်းတွေ မူးလာလိုက်တာဗျ ။ အသက်ပြင်းပြင်းရှုလိုက်ရင် သက်သာမယ်ထင်လို့ဆိုင်ကယ်ကို လမ်းဘေး ခဏထိုးရပ်လိုက် တယ် ။ ရင်ဘတ်ထဲ အတော်လေး နာလာတာဗျ ၊ ဒီလမ်းက သွားနေကျဆိုတော့ ရပ်လိုက်တဲ့နေရာ က ဆိုက်ကားဆရာ တချို့ နဲ့လည်း မျက်မှန်းတမ်း မိနေတယ် လေ ။ အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာ လူရွယ်တယောက် က လှမ်းမေးလိုက် တာ တဝက်တပျက် ကြားမိလိုက်ပြီး .......တလောကလုံး အမှောင်ကျသွားတော့တာဘဲ ။ သတိလက်လွတ် မဖြစ်ခင် နောက်ဆုံး မြင်လိုက်ရတာတော့ ကျုပ်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးလေး ၊ ပြီးတော့ .... ဒီ မို က ရေ စီ ...........
ကျုပ် အိပ်မက် မက်နေသလားဗျ ။ တကိုယ်လုံးတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဘဲ ။မြင်ကွင်းတွေကတော့ သိပ်မကြည်လင် လှဘုး ။ ကျုပ်ကို ဆိုက်ကားဆရာလေးက ပွေ့ ချီပြီး အနီးမှာ ရှိနေတဲ့ရဲစခန်းဆီ ခေါ်သွားပေးတယ် ။သူကလည်းစေတနာ နဲ့ ပေါ့ဗျာ ။ လမ်းဘေးမှာ လဲကျနေတဲ့သူတယောက် အတွက် အလျင်အမြန်လာခေါ်ပေးမဲ့အရေးပေါ်ကား ဆိုတာ မှ မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ကိုး ။ ရဲစခန်းရောက်တော့ ဟိုမေး ဒီမေးပေါ့ ။ဆိုက်ကားဆရာ က ကျုပ်ကို ဘယ်သိမတုံးဗျ ။ဒီလို နဲ့ ကျုပ်အိတ်ထဲ ပါလာတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နဲ့ ဖုံးနံပတ်ရေးထားတဲ့ စာရွက်ပိုင်းလေး တွေ့ တော့ အိမ်ကို ဖုံးဆက်တယ် ။ဖုံးတွေ ကလည်း သိကြတဲ့ အတိုင်း ချက်ချင်းမရကြတာ တွေက ခပ်များများ ။ နောက်တော့ အငှားကားတစီး နဲ့ကျုပ်ကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး ပို့ ခဲ့ကြတယ် ။
ဆေးရုံရောက်တော့ ကျုပ်မိန်းမက အရင်ရောက်နှင့်နေပြီ ။သူ အတော် စိတ်ပူနေရှာတယ် ။ သူ့ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ အရေးပေါ်ခန်းက ဆရာမတွေလည်း ကျုပ်တွေ့ နေကြ ဆိုတော့ လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်ဗျ ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကျုပ်ကို စကားပြန်ပြောဖို့အချိန်မရကြပါဘုး ၊သွေးပေါင်ချိန်တဲ့သူတွေနဲ့ ၊ အောက်စီဂျင်ဗူးတွေနဲ့ ၊ ဆေးပုလင်းချိတ်တဲ့သူတွေနဲ့၊အသက်ကယ်ဆေး ထိုးတဲ့ သူတွေ နဲ့ မအားကြဘုးလေ ၊ DOA လို့ တော့ ပြောနေသံတွေကြားတာဘဲ ။ ဘာလဲတော့ ကျုပ်လဲ နားမလည်လို့ ၊ စပ်စုတဲ့ ကျုပ်က မိန်းမ ကို လှမ်းမေးမိသေးတယ် ။ သူပဲ မကြားတာ လား မပြောတတ်ပါဘုး ။ ကျုပ် ကို ဘာမှ ပြန်မဖြေဘုး ။ သူ့ စကားနားမထောင်ဘဲ အပြင်ထပ်ထွက်လို့ကျုပ်ကို စိတ်ဆိုး နေတာ များလား ။ နောက်တော့ အီးစီဂျီ နှလုံးစက်နဲ့ ရင်ဘတ်မှာသွယ် ။ ပြီးတော့ ရှော့တ်ရိုက်ကြ သေးတယ်ဗျ ။ ကျုပ်မှာတော့ မချိမဆန့် နဲ့ ပါဗျာ ။
ကျုပ်သမီးကြီးကတော့ ငိုနေတာ တွေ့ ပါရဲ့။ ဒီလိုနဲ့အချိန် တစ်နာရီကျော်လောက် ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေ အလုပ်ရှုပ်သွားလိုက်ကြတာ အားတောင်နာမိသေး ။ ကျုပ်မိန်းမ ကတော့ မျက်ရည်တစက်မှ မကျတာ ၊တယ်စိတ်မာတဲ့ မိန်းမဘဲ လို့ တောင် စိတ်ဆိုးမိသေး ။နောက်မှ ပြန်စဉ်းစားမိပါတယ် ။ သူ တယောက်တည်းနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သားသမီးတွေ တာဝန်ဆက်ယူဖို့အားတင်းထားလိုက်ရမှန်း သဘောပေါက် တော့တယ် ။
အအေးကြောက်တဲ့ကျုပ်ဗျာ ။အဝတ်မပါ ဗလာကျင်းပြီး အေးစက်စက် နေရာမှာ ကျုပ်ကိုထားလို့ နောက်တရက်ကျ ဟိုခွဲ ဒီခွဲ လုပ်ကြသေးတယ် ။ ထူးဆန်းတယ်ဗျ ။ ကျုပ်လေ ဘာထုံဆေး မေ့ဆေးမှ မပါဘဲ ခွဲ စိပ်ခံရတာ ၊ တချက်မှ ကို မနာမိဘူး ။ ပြီးတော့ ဦးခေါင်းရယ် ၊ ရင်ခေါင်းကနေ ဗိုက်ထိ တတောင်လောက်ရှည်တဲ့ ဒါဏ်ရာတွေ ပြန်ချုပ်ပြီး ပို့ ပေးလိုက်တဲ့နေရာကတော့ ဆေးရုံထဲက လူနာခန်း မဟုတ်ပါဘုး ။ကျုပ် အမေ နေ တဲ့ နေရာ မှာ ရှိတဲ့အအေးခန်း၊ ဗီဒိုလို အကန့် လိုက်တွေဗျ ။ တခြား အဖေါ်တွေလည်း ရှိပါတယ် ။ ကျုပ်လည်း ဦးဆုံးတော့ စပ်စု အုံးမလို့ ပါဘဲ ။ နောက်မှ စဉ်းစားမိတာ ကျုပ်ဒီနေရာမှာ လာဇိမ်ကျ နေတော့ ကျုပ်ကားစုတ် တွေ ဘယ်သူ နို့ ညှစ်ပေး မလည်း ပေါ့ ။ ကျုပ်ဆိုင်ကယ်စုတ်လေး ကိုလည်း စိတ်မချ ဘူး ။ဒါကြောင့် အပြေးတပိုင်း အိမ်ပြန်လာတယ်ဗျာ ။
အိမ်ရောက်တော့ လူတွေ အတော်များများ ရောက်နေကြတယ် ။ ကျုပ်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းကြီးတွေ ၊ ကျုပ်ဆွေမျိုးတွေ ။ ဒီ ၃ ရက် အတွင်း ကျုပ်မိန်းမ မျက်နှာ တော်တော်ချောင်သွားလိုက်တာဗျာ ။ နယ်က သူ့အမျိုး တွေလည်း ရောက်နေကြပါလား ။ ၅ရက်ထားမယ်လို့ တော့ ပြောသံကြားနေရတယ် ။ ကျုပ်မေးတော့လည်း ဘယ်သူမှ ဂရုတစိုက် ပြန်မဖြေကြဘုးဗျ ။ ကျုပ်ရဲ့ ခြံထိပ်မှာ ဟိုတကောင် ယောင်လည်လည် လုပ်ပြီး စောင့်နေတာ လည်း တွေ့ ခဲ့တယ် ။ သူတို့ ခမြာ မလည်း ဟို အိမ်ပေါက် ချောင်းလိုက် ။ ဒီ အိမ်ဝ စောင့်လိုက် ၊ သတင်းတွေ ပို့ လိုက်နဲ့အထက်ကခိုင်းတာ လုပ်နေကြရှာတာပါ ။။သူ့ ဆန်စား ရဲမှ ဆိုတဲ့ စကား ကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ အပေါ်စီးက နေတဲ့ သူတွေ ကလည်း ဘာကိုကြောက်နေကြတာလဲ မပြော တတ်ဖူးဗျို့။ အမြင့်ရောက်လေ အကျနာလေ ဆိုတာ သိလို့ကြောက်ကန်ကန်နေကြရရှာတာ ။ ရွှေဘုံပေါ်စံ နေကြရပေမဲ့စားလည်းကြောက် ၊ သွားလည်းကြောက် ၊ ဒီလို ဘဝတွေလည်း တယ်မလွယ်လှဘုး ။
၅ ရက်မြောက်တဲ့ နေ့။ ကျုပ်အတွက် အေးချမ်းသက်သာစွာ နေရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ခဲ့ ပြီပေါ့ဗျာ ။ ဘဝတလျှောက်လုံး နေခဲ့ရ လုပ်ခဲ့ရတာ တွေလည်း အတော်လေး ပင်ပန်းလှပါပြီလေ ။ ရှိခဲ့သမျှ သံယောဇဉ်တွေ အကုန်ဖြတ်ပြီး ကျုပ်တယောက်တည်း နေဖို့ ၊ ကျောတနေရာ စရာ ချဖို့ ၊ ကျုပ်အမေ နဲ့ မနီးမဝေး တနေရာလေး ကျုပ်ရခဲ့ပါပြီ ။ အဲဒီ အချိန်တုံးက စိတ်မကောင်း မိတာ တခု ပဲ ရှိပါတယ် ။ ကျုပ်မိန်းမ နဲ့ သားသမီးတွေ အတွက် စိတ်ပူ တာတော့ မဟုတ်ဘူး ဗျ ။ သူတို့ လမ်း သူတို့ရှေ့ဆက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် လျှောက်ကြလိမ့်မယ် ဆိုတာ ကျုပ်ယုံ တယ် ။
ကျုပ်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိအောင် စိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ ရတဲ့ သူတို့ ကိုသာ ကျုပ်လှမ်းကြည့်နေမိရင်း ကျုပ်မိန်းမ နောက်ဆုံး စကားသံ
" ကဲ .... ကျွန်မယောကျာင်္း တကယ်သေတယ် ဆိုတာ ယုံကြပြီလား။ ရှင်တို့ ကြည့်ပြီးရင် အခေါင်းပိတ် လို့ ရပြီလား " ။
ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန် မတော့ ကျုပ် ဘာဆက်ပြောလို့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ။ နောင်ဘဝဆက်တိုင်း ဒီလို လူတွေနဲ့မတွေ့ ပါရစေနဲ တော့ လို့ဘဲ....
ကျုပ်စိတ်ထဲ တိုးတိုးလေး ပြောနေမိတာ က "မိန်းမရေ ။ စိတ်လျှော့ကွာ ။ ငါမင်းကို တယောက်တည်း ထားခဲ့ ပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်း ခဲ့ ရတာ မင်းစိတ် မဆိုးပါနဲ့ ။ ငါတို့ လိုချင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ငါတို့ သားသမီး မြေးမြစ်တွေ ရှိနေသေးတယ် လေ"
ယုံကြရဲ့ လားဗျာ ။ အရှင်ထွက် ထွက်သွား မစိုးလို့ကျုပ် အခေါင်းပိတ်၊ အလောင်းမြေကျတဲ့အချိန်ထိ ဂရုတစိုက် လိုက်လံစောင့်ရှောက် ပေးနေကြတဲ့မောင်မင်းကြီးသားများ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြ ပါစေ ဗျား ။
( ချစ်သော အဖေ သို့အမှတ် တရ )
:kiki : at 9/22/2009 03:00:00 AM
ကျုပ်ဘဝအကြောင်းလေးတချို့ပြောပြချင်တယ်ဗျာ ။ ကျုပ်က စစ်သားဆိုတော့ စိတ်ကြမ်း လူကြမ်းလို့ အများက ထင်ကြမယ် ။ထင်လောက်အောင်လည်းကျုပ်က နေခဲ့ပြောခဲ့ တာကိုးဗျ ။ကျုပ်သမီးတွေတောင် ကျုပ်ကို အမြင် သိပ်ကြည်ကြတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဗျာ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်တာဝန် ကျုပ်ကျေခဲ့တယ် စစ်သားတယောက်ရဲ့ ဘဝ မှာ စစ်ပွဲဆိုတာတွေလည်းနွှဲခဲ့ဖူး တာပေါ့ ။ကျုပ်နိုင်ငံကို ထိပါးမဲ့ ရန်သူနဲ့ တွေ့ ရင် ကျုပ်တိုင်းပြည်၊ ကျုပ်လူမျိုး အတွက် ခုခံခဲ့ရတယ် ။ အဲ့ဒီ အတွက် ရခဲ့တဲ့ ဆုလဒ်တွေကတော့ ကျုပ်ရဲ့ ညာဖက်ခေါင်း နဲ့ ခြေထောက်မှာ ထိခဲ့ရတဲ့ သေရာပါမဲ့ ဒါဏ်ရာ ဒါဏ်ချက်တွေ ပါဘဲ ။ ဒါတွေ အတွက် ကျုပ်ဝမ်းမနည်းပါဘူး ။ စစ်သားတယောက် စစ်မြေမှာ ဒါဏ်ရာ ရတာ အဆန်းမှ မဟုတ်တာဘဲဗျ ။
ဒီလို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေခဲ့ရပေမဲ့ ကျုပ်မှာ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိပါသေးတယ်ဗျာ ။ ကျုပ်လက်အောက်က အရာရှိ အကြပ် တပ်သားတွေ အပေါ် ကျုပ်ဘယ်တုန်းက မှ အနိုင့်ထက်စီး မလုပ်ခဲ့ဘူး ။ သူတို့အဆင်မပြေရင် ကျုပ် မရှိ ရှိတာ တတ်နိုင်သလောက် ပေးခဲ့တယ် ။ ကျုပ်လဲ ဒီလို ဘဝက တဆင့် တဆင့်တက်လာခဲ့တာ ၊စစ်သားပေါက်စ ဘဝကို ကျုပ် နားလည်တယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဗျာ ကျုပ်နားမလည်တာက ကျုပ်အထက်က အကောင်တွေဘဲ ။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ သူတို့ထဲက အချင်းချင်းလဲ သိပ် တဲ့ကြတာ မဟုတ်ဖူးဗျ ။
တပ်ထဲမှာ နေရင်၊သက်ဆိုးရှည်ချင်ရင် ဖ သုံးလုံး ကျေကြရတယ် ။အထက် ကကောင်ကို ဖါး ၊အောက်ကကောင်ကို ဖိ ၊တန်းတူတဲ့ကောင်ကို ဖြုတ် ဖို့ လုပ်ကြတဲ့ လောကကြီးဗျို့။ ဒီလို ကောင်မျိုးတွေ တနေ့တခြား များလာတဲ့ကျုပ်တို့တပ်လောကကြီး ထဲမှာ ခပ်မှန်မှန်နေတဲ့ကောင်တွေက ဂျောင်ထိုးခံရတယ် ၊မှန်ရုံတင်မက သူတို့ နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မရှိတဲ့ကောင်တွေ ဆို ဖြုတ်ထုတ်သတ် လမ်းစဉ် ပေါ့ဗျာ ။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဂျစ်ကန်ကန်လုပ်တတ်တဲ့ ကျုပ် စောစောစီးစီးဘဲ ကျုပ်ချစ်တဲ့ တပ်ကို လမ်းခွဲခဲ့ရတယ် ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ လူ့ လောကကြီး တပ်လောကကြီး အကြောင်းကောင်းကောင်း နားလည် သဘောပေါက်လာခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ကျုပ်က နဂိုတည်းက ခေါင်းမာတဲ့ အကောင်ဘဲဗျ ။ ဝမ်းမနည်းခဲ့ပါဘူး ။ ။ တကယ့် မိတ်ဆွေရင်း ဆိုတာ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ မှခွဲခြား သိမြင်ခဲ့ရတာပေါ့ ။ အရင် ကျုပ်ရာထူးရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ လာနေကြတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ ထဲက တော်တော်များများ ဟာ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် သလိုဘဲ ပျောက်ကုန်ကြတာ ဗျ ။ ကျုပ်ကတော့ ဘာမှ အာဂတ မထားခဲ့ပါဘူး ။ သူတို့ လည်း သူတို့ ရှေ့ ရေး သူတို့ ကြည့်ရမှာဘဲလေ ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့မြင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
အဲဒီ အချိန်တုံးက တပ်ထွက် ပင်စင်စားတွေ အတွက် ကပစ ကနေပြီး ထုတ်ပေးတဲ့ကားတွေ ရှိတယ်ဗျ။ ကျုပ်နဲ့ တပတ်ထဲဆင်းတဲ့အကောင်ဆီက လက်မှတ် တခုပါရင် အဲဒီကားတွေ ထုတ်လို့ရတယ် ။ဒီတော့ ကျုပ်မိန်းမက ပြောပါသေးတယ်ဗျာ ။ "ကားပါမစ်လျှောက်လွှာ သွားယူပြီး ရှင့်သူငယ်ချင်းဆီမှာ လက်မှတ်သွားထိုးခိုင်းပါလား "တဲ့ ။ ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ခက်သားဗျ ။ အဲလို အောက်ကျ နောက်ကျ ခံချင်တဲ့ကောင်မဟုတ်တော့ ကျုပ်မိန်းမကို ပြောပစ်လိုက်တယ် ။ " မင်းဆီမှာ စီးစရာ ကားမရှိလို့ လားကွ၊နောက်ဆို ဒီလို အောက်ကျို့ ရမဲ့အလုပ်တွေ ဘယ်တော့မှ လာမလုပ်ခိုင်းနဲ့ "လို့။ဒါကလည်း ကျုပ်မိန်းမကို အပြစ်မဆိုသာပါဘူး ။ သိတယ်မဟုတ်လား ၊ကိုယ်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေး တော့ ယူသင့်တယ်လို့သူယူဆ တာ မမှားပါဘူး ။ ကျုပ်သမီး အကြီးဆုံးဆို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီး ဖြစ်နေပြီဗျာ ။သူလည်း ကားသစ်လေး စီးချင်ရှာမပေါ့ ။ ကျုပ်ရာထူးရှိတုံးက ကျုပ်အတွက်ပေးထားတဲ့ တပ်ကကားဆိုတာတွေတောင် သူတို့ တခါမှ စီးဖူးခဲ့တာ မဟုတ်ဖူး ၊ ဘုရားစူးရပါစေရဲ့ဗျာ ။ သူတို့ဟာသူတို့ ကျောင်းကားစီး ခိုင်းခဲ့တာ ။တခါတလေ ဘတ်စ်ကား စီးခိုင်း တယ်ဗျာ ။ ဘာဖြစ်သေးလဲ ။
ဒီလိုနဲ့ ပင်စင်စားဘဝ ရောက်တော့ ကျုပ်ပျော်ပါတယ် ၊ကျုပ် ဘယ်သူ့ ကိုမှ အောက်ကျို့ စရာမလိုတော့ဘုး ။ ကျုပ် ဝါသနာပါတဲ့ ကားစုတ်တွေ နဲ့ ကျုပ်အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။သမီးတွေကို မုန့်ဟင်းခါးစားခိုင်းလိုက် ၊ကားစုတ်တွေ နဲ့ နို့ ညှစ်လိုက် ဟန်ကျနေတာ ။ အသေးစိတ်တော့ မပြောပြတော့ဘူုးဗျာ ။ ကျုပ်သမီး ဟို အလတ်မ က ဖေါက်သည်ချထား ပြီးသားတွေဘဲ ။
ဒီလိုနဲ့ ဖ သုံးလုံးကျေ တဲ့ အကောင်တွေကြောင့် လူတွေ တဖြေးဖြေး စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းလာလိုက် တာဗျာ ။ ၈၈ ခုနှစ်ရောက်တော့ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး ကမောက်ကမ ဖြစ်ခဲ့ ရတယ် ။ အဲဒီအချိန် မှာ ကျုပ် မျက်စိရှေ့ မှာ ကိုယ်တိုင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့် စိတ်ကြမ်းလူကြမ်း ကြီး ကျုပ်တယောက် မျက်ရည်ကျခဲ့ ရတယ် ။ ဘဲ့ နှယ်ဗျာ ကျုပ်တသက်လုံး ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတဲ့ စစ်တပ် နဲ့ ဒီစစ်သားတွေ က အပြစ်မဲ့တဲ့ကိုယ့်ပြည်သူတွေ ကို ပြန်ပစ်သတ် ရက်ကျတယ် လို့။ကျုပ်တို့ ဗိုလ်ချုပ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော် ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေကို ပြန်သတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူးဗျ ။ကျုပ်ဆိုလိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြမှာပါ ။ခုခေတ်လို ချီးပေါ သေးပေါ ပေါနေတဲ့၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရင်ဘတ်တံဆိပ်အပြည့်ဆွဲထားကြတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်ကောင်တွေကို ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး ။ သူတို့ အချင်းချင်းလည်း ကွဲကြ ပြဲကြ နှိပ်လိုက်ကြနဲ့ပြည်သူတွေ မှာ ကြားက မြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့ ရတယ် ။ဘာမှ နားမလည်သေးတဲ့ နယ်ကစစ်သားပေါက်စအရိုင်းလေးတွေကို ဦးနှောက်ဆေး ၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့ ကြတယ် ။ မသေရုံတမယ် ရာရှင်လေးပေးပြီး ရန်ကုန်မြို့ ကြီး သူပုန်ဝင်စီးလို့စစ်ပွဲကြီးနွှဲပြီး ကယ်တင်ရတဲ့ အသွင်ဖန်တီးခဲ့ကြတယ် ။စိတ်ကြွဆေးတွေကျွေး၊ လူစိတ်ပျောက်အောင် လုပ်ခဲ့ကြပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ အပြစ်မဲ့ တဲ့ ပြည်သူ တွေကိုသတ်ခိုင်းခဲ့တယ် ၊
အဲဒီမှာ တချို့ တပ်တွေလည်း ပြည်သူ့ ဖက်က ရဲရဲကြီးရပ်တည်ခဲ့ ပါ့ဗျာ ။ ဒီမှာတင် တပ်ပြေးဆိုတာတွေ ဖြစ်လာကြရတာ ။ စစ်သား ဆိုတာ ဟာလည်း နှလုံးသား ရှိတဲ့ လူတွေဘဲဗျ ။ အာဏာရူး ၊ ဥစ္စာရူးတွေ ရှိသလို တကဲ့ပြည်ချစ် စစ်သားတွေ ရှိကြပါတယ်ဗျာ ။ အာဏာရူးတတွေကြောင့် ကျုပ်မြတ်နိုးတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကြီး က အမဲစက် စွန်းထင်းခဲ့ ရတယ် ။ စစ်သားဆိုတဲ့အသံကြားရယုံနဲ့လူတော်တော်များများက အော်ဂလီ ဆန် ခဲ့ကြရတယ် ။ စစ်သားထဲမှာလည်း ဘုရား တရား သံ ဃာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြ သူတွေ ရှိပါတယ်ဗျာ ။ငခုံးမ တကောင်ကြောင့် တလှေလုံး ပုတ်ခဲ့ ရတဲ့အဖြစ်တွေ ကျုပ်ရင်နာသလို သူတို့လည်းရင်နာမိသူတွေ ရှိမှာဘဲ ။ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ကြပါအုံး ။ လူတွေ တယောက်နဲ့ တယောက် ဘီလူး သူရဲ စီးသလိုမျိုး အကြောင်းမဲ့ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ကြတာ ၊ အဆိပ်ခတ်သတ်ကြတာ ။ဒေါသထွက်အောင်လုပ်ကြတာ ဘယ်သူတွေ က သတင်းဖြန့် ၊ ခြေထိုး ၊ တပတ်လှည့် ခဲ့ ကြလို့လဲ ဆိုတာ ။ အဲဒီအချိန်တွေကများဆို ရန်ကုန် မြို့ကြီးက တကဲ့လူသတ်ကွင်းဘဲဗျို့ ။ စစ်ပွဲတွေ နွှဲလာခဲ့ တဲ့ကျုပ်လို လူတောင် မကြည့်ရက်ဖူးဗျာ ။
ဒီနောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကြီးလုပ်ပေးပြီး တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်တာနဲ့ စစ်တန်းလျှားကို ပြန်ပါ့မယ် ဆိုတာ မျိုးလည်း အရှက်မရှိ ပြောခဲ့သေးတယ်ဗျို့။ ဖ သုံးလုံးကျေကြတဲ့ စစ်ဗိုလ်များကတော့ နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာလာကြသလောက် မှန်တဲ့ကောင်တွေက အကန်ခံခဲ့ ကြရတယ်။ ကျုပ် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ။ တချို့ ဟာ စစ်သားပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းသူတွေ တပုံကြီး ရှိသေးတယ်ဆိုတာ လည်းနားလည်တယ် ။ ဗိုလ်အုန်းကျော်မြင့်လို စစ်သား မျိုး လည်း နောက်တကြိမ် ပေါ်လာအုံးမယ်လို့ယုံကြည်ရင်း ဒီမိုကရေ စီ ဆိုတာကြီးကို မျှော်လင့်လာလိုက်တာဗျာ ....
( ဆက်ပါဦးမည် ...) အဖေ့ ရဲ့လေသံနှင့် ခံစားချက်များကို မှတ်မိသလောက် အမှတ်တရ အဖြစ် စုစည်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ။
:kiki : at 9/21/2009 10:02:00 AM
မူးတာကြိုက်သူများအတွက် မူးစေတတ်တဲ့ Fig လို့ခေါ်တဲ့ အသီးတမျိုး အကြောင်း ဖေါက်သည်ချလိုက်ပါတယ် ..သူ ကမူးယစ်ဆေးဝါးထဲ ပါ မပါတော့ မပြောတတ်ပါ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မူးယစ်စေတတ်တယ် ဆိုတာ ကတော့ မကောင်း ဘုးပေါ့လေ ။ မူးယစ်နေချိန်မှာ လူစိတ်ပျောက်တတ်တယ် ။ အမှားတွေ ပြုတတ်တယ် ။ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ကြားဖူးတယ်ရှိအောင် တင်ပြပေးတာပါ ..(သိပြီးသားသူတွေ ရှိမှာပါ ။ ကိုယ်တိုင်က ခုမှ သိရတော့ ရီစရာ ပုံလေးကို မျှဝေပေးရအောင် ဒီ အသီး အကြောင်း ဟိုရှာ ဒီရှာ နဲ့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်)
ပုံလေးတွေကို ဒီက ယူထားပါတယ်
Fig အသီး အခြောက်
Fig အသီးရဲ့ အတွင်းမှာ အပွင့် ရှိတယ် ။ သူက ပြောင်းပြန်ကြီး။ အသီးထဲမှာ အပွင့်တဲ့လေ ။
Fig အသီးအကြောင်း အနဲငယ် ပြောပြပါမယ် ။ ဗဟုသုတ ပေါ့ ။
အနောက်တောင် အာရှ ၊မြေထဲပင်လယ် ၊အာဖရိက ၊ သြစတြေးလျ၊ အမေရိကတိုက်၊ချီလီ ၊ မက္ကဆီကို စသော ပူအိုက်စွတ်စိုသောဒေသများမှာ အလေ့ကျပေါက်တဲ့Fig ဟုခေါ်သောအသီးတစ်မျိုးမှာ ၊ fiber ခေါ် အမျှင်များ ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ ကေ ဓါတ်များ ,ကယ်လ်ဆီယံ ထုံးဓါတ် ,copper, manganese, magnesium, potassium, နဲ့သကြားဓါတ် အစရှိသည့်ဓါတ်များ ပါဝင်တဲ့ အတွက် ဝမ်းပျော့ ဝမ်းမှန်စေပြီး antioxident ခေါ် ဇီဝကမ္မ ပျက်စီးမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သော အစွမ်း တွေ ရှိပါတယ် ၊ အဲဒီ Fig အပင်က Ficus carica မျိုးနွယ်ထဲမှာပါဝင်တယ် ။ သူ့ ရဲ့ မျိုးစု Family က Moraceae ပါ ။
အပြင်ပုံ သဏ္ဍန် မှာ အောက်ခြေကားပြီး အပေါ်သို့သေးသွယ်ချွန်တက်သွားလို့ ခေါင်းလောင်းပုံရှိပါတယ် ။ အရောင်အနေနဲ့ ခရမ်း၊ အညို၊ အစိမ်း၊ အဝါ၊ နီ ညို၊ အမဲ မျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ထူးခြားချက်ကတော့ သူ့ ရဲ့ပန်းပွင့် ဟာ အသီးထဲမှာ တည်ရှိနေခြင်း ပါဘဲ ။ ဒါကြောင့် တရုတ်ဘာသာ အရ သူ့ ကို အပွင့်မဲ့ အသီး (無花 , 无花果 ) လို့ ခေါ်ကြပါတယ် ။
ဒီအသီးက ပျော့ပြီး ပါးလွှာတဲ့ အခွံသာ ရှိတဲ့အတွက် မှည့်တာနဲ့ ပျော့ပြဲလွယ်တဲ့ အတွက် သူ့ ကို အခြောက်ခံ ပြီးမှ သယ်ရ ၊ရောင်းရတာလွယ်ပါတယ် ။ သူ့ ကို jam ( ယို ) လိုမျိုးထိုးပြီး စားသုံးကြပါတယ် ။
တောထဲမှာ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ ထိုအသီး ရာသီရောက် ၍မှည့်သောအခါ အပူချိန်ပြင်းသော အရပ်ဒေသဖြစ် လို့ အချဉ်ပေါက်၍ ယမကာအာနိသင်ကိုရရှိစေတယ်ပေါ့ ။ တောတွင်းတိရစ္ဆာန်များ လာရောက်စားသောက် ကြတယ် လေ ။ အချို့တောကောင်များက အပင်ကကို ခါရမ်း ပြီး အသီးကို ချွေ ချ တယ် ။ ဥာဏ်ကြီးရှင် ဌက်များကတော့ သူ့အန္တရာယ်ကို ကြိုသိ လို့လုံးဝမစားတတ်ကြ ပါ ဘူး တဲ့ ။
တိရစ္ဆာန်တွေဘယ်လို မူးတတ်ကြလည်းဆိုတာ သိချင်ရင် အောက်မှာဆက် ကြည့်လိုက် နော် ။ ဆင် နဲ့ မျောက် နဲ့ ဘော်ဒါတွေ ပိုက်ဆံ မကုန်ဘဲ မူးနေကြတာ ။ ပြင်သစ်လို ပြောနေတာ ဘာတွေမှန်းတော့ နားမလည်ပါ .. ပုံကိုကြည့် ရန်သာ ပါလေ )
အရက်သမားတွေ ဗမာပြည်က ချက်အရက်တွေထဲ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဟာတွေရောချက်ထားကြလို့အသည်းရောဂါတွေ ရပြီး တနှစ် တနှစ် ရှောဘရားသား ဖြစ်သွားကြတာ မနည်းဘူး လို့သိရတယ် ။ အန္တရာယ်ကင်းစွာ နဲ့ မူးလို သူများ ဤသို့ပြုကြပါကုန် ....( အားပေး အားမြှောက် ပြု ခြင်း မဟုတ်ပါ ။ ပြောမရ ဆိုမရ နဲ့ သောက်တတ်ကြသူများ အတွက် စဉ်းစားမိလို့ပါ)
ဒီက အချက်အလက်တွေ ယူပါတယ်။
တောထဲ တောလည်ထွက်ရင်း ဒီလို အသီးတွေ တွေ့လို့ လျှောက်မစားကြနဲ့နော် ။။
:kiki : at 9/19/2009 09:10:00 PM
( ဒီပုံလေးက ကြည့်ဖူးပြီးသားသူတွေ ရှိမှာပါ။ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေ အတွက် ဆားချက်ပါတယ် ။သိပြီးသား သူတွေကတော့ သိပြီးသားမို့ နောက်တခါထပ်ကြည့်ရင် သူ့ အတွက် အဖြေက မကောင်းတာမို့ထပ်မကြည့် ကြပါနဲ့တော့လေ... )
သင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ုဖြိုးမှု ဘယ်လို အခြေအနေရှိနေပါသလည်း ဆိုတာ သိချင်ကြပါသလား ၊။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရူးကြောင် မူးကြောင် ဖြစ်နေသလား လို့ စမ်းကြည့်ရအောင် ။အဟက် ။မသိချင်သူတွေ ဆက်မကြည့် ကြပါနဲ့။ တချို့ တလေတွေက ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဦးနှောက်ထက်တယ်ထင်နေသူများ လူသိမခံချင်ရင် လူရှင်းတဲ့ အခါမှ တိတ်တိတ်လေးစမ်းကြည့်ပေါ့နော် ။
ပုံကိုစ မကြည့်ခင် .ခု ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲဆိုတာ အရင်မှတ်ထားလိုက်ပါအုံး ။ မှတ်ပြီးပလား ။ ကဲ ..စမယ် နော် ။
အောက်က ကော်ဖီစေ့လေးတွေထဲမှာ ရှာကြည့်ပါ ။ လူတယောက် ပုံရှိတယ်နော် ။ တွေ့ လား ။ မတွေ့ ရင် တွေ့ တဲ့ အထိကြည့် ၊ ။
ဖြေးဖြေးရှာ ကြည့် ၊ အေးဆေးရှာ ။တွေ့ပြီလား လို့ ။ ဖူးစာရှင် ဖြစ်မဲ့သူတယောက် ဒီအထဲမှာ ရှိနေတယ် ။(အဲ ၊ ပြောတိုင်း ယုံပါဘူး .)
ဖြေးဖြေးရှာလို့ သာပြောရတာ သိပ်ဖြေးလွန်းရင်လဲ မကောင်းဘူးနော် ။ မဖြေး မမြန်လေးမှ သူများတွေနဲ့တန်းတူ ယှဉ်နိုင်မှာပေါ့ ကွယ် ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အချိန် အကန့် အသတ်လေးတွေ လုပ်ထားလို့ ပါ။
-သင့်ဖူးစာရှင် ( သူ့ ပုံကို ) ၃ စက္ကန့် အတွင်း မြင်မိတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ညာဖက်အခြမ်း ဦးနှောက်ဟာ အလွန် ဖွံ့ုဖြိုး နေပါတယ် တဲ့။
-၃ စက္ကန့် မှ ၁မိနစ် အတွင်း သူ့ ပုံကို ရှာတွေ့ တယ်ဆိုရင် ပုံမှန် ဦးနှောက် ပါတဲ့ လေ ။
-၁ မိနစ်မှ ၃ မိနစ် အချိန်အတွင်းမှာ မှ သူ့ ကို တွေ့ ရင်တော့ ဦးနှောက်အလုပ် လုပ်ပုံ က နဲနဲ လေး နေပါပြီ ။ အသားဓါတ် များများ စားဖို့လိုအပ်နေပြီ နော် ။
-အဲလေ .. ၃ မိနစ် အချိန်ကြီးများကျော်ပြီး မှ မတွေ့ချင် တွေ့ချင်နဲ့တွေ့ သွားရတာ ဆိုရင် တော့ သင့် ညာဖက်ဦးနှောက် ဖွံ့ ဖြိုးအောင် လေ့ကျင့်ခဏ်း တွေ များများသာ လုပ် ပါတော့ ။
အော်ရီဂျင်နယ်လေးမှ ဖတ်ချင်ရင် ဒီလိုပါ ။
This is bizarre -- after you find the guy -- it's so obvious.
( အပျင်းပြေရုံ သက်သက်ပါ ... )
:kiki : at 9/18/2009 03:00:00 PM
ခုံ တွေအကြောင်း ခေါင်းထဲက မထွက်သေးလို့ဆက်ဦးမယ် ။ Musical Chair ဆိုတဲ့ ခုံဦးတမ်း ဆော့တာလေး သိကြမှာပေါ့ ။ လူတိုင်းလိုလို ကစားခဲ့ ဖူးကြမှာပါ ။
ပါဝင်ကစားမဲ့လူဦးရေ ထက် တခုံ လျှော့ ပြီး ခုံတွေ အများကြီး စီထားတယ် ..စီပုံ စီနည်းက အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ် လေ ။ တချို့ က အဝိုင်းပုံ ဖြစ်အောင် စီတယ် ၊တချို့ ကျတော့ အတန်းအရှည်လိုက် နောက်မှီချင်းကပ်ရက် စီတယ် ။ နေရာ အကျယ်အဝန်းအလိုက်ပေါ့ ။ ပြီးတော့ သီချင်းဖွင့် ပြီး ကစားတဲ့သူတွေက အဲဒီခုံတွေကို ပတ်ပတ်လည် လျှောက်နေကြရတယ် ။ သီချင်းရပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်နီးရာ ခုံကို ရအောင်ပြေးထိုင် လုထိုင်ကြရတယ်။
တခုံလျှော့ထားတဲ့ အတွက် သီချင်း တခါ ရပ်လိုက်တိုင်း လူတယောက်ကထိုင်စရာ နေရာ မရ ဖြစ်မယ် ။ အဲ့ဒီ နေရာမရလိုက်တဲ့သူက ဆက်မကစားရတော့ ဘူးပေါ့ ။။ အောက် ပြီ ။ ဒီလို နဲ့နောက်ဆုံး ခုံတလုံး နဲ့လူ ၂ ယောက်ပဲ ကျန်မယ် ။ အဲဒီ အချိန်ဟာ ကစားပွဲရဲ့အထွဋ္ဋ် အထိတ် အရောက်ဆုံး အချိန်ပေါ့ လေ ။ ဘယ်သူ ခုံနေရာ ရမလဲပေါ့ ။ နောက်ဆုံး ခုံပေါ်မှာ နေရာ ရသွားသူ က ဒီပွဲ မှာ အနိုင်ရတယ် ။ ဆုရတယ်ပေါ့ ။တခါတလေ နှစ်ယောက်စလုံး ခုံတခုတည်းမှာ တဝက်စီ ကို ပုံသဏ္ဍန် အမျိုးမျိုး နဲ့ထိုင်မိကြတာ လည်းရှိပါ့။ အဲ့ လို အချိန်တွေ ဆို ရယ်စရာ ကောင်းပါလေ့ ။ သူအရင်ထိုင်တယ် ။ ငါအရင်ထိုင်တယ်နဲ့ငြင်းကြတော့တာဘဲ ။ ဒီတော့လည်း ဘေးက ပရိတ်သတ်က ဝင်ပါလာရော ။ ဘယ်လို ဘယ်ဝါ ဘယ်ချမ်းသာပေါ့လေ ။
နောက်ဆုံးခုံ အတွက် လျှောက်နေကြတဲ့လူ နှစ်ယောက် ရဲ့လျှောက်ပုံ လျှောက်နည်း နဲ့စိတ်ထဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဆုတောင်းပုံ လေးကလည်း မတူဘူး ။ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး ။ အမျိုး မျိုး ကို ပြောင်းနေတာ။
နောက်မှီပါတဲ့ ခုံဆိုတော့ ရှေ့ ဖက် ကနေ ပစ်ထိုင်လို့ ရတဲ့ နေရာရောက်ရင် ဖြေးဖြေးလေးလျှောက် အဲ့ ဒီ အချိန်မှာ သီချင်းသံ ရပ်သွားပါစေ လို့ဆုတောင်း မျှော်လင့် တမ်းတ ..ပေါ့ လေ။ နောက်မှီတဲ့ ဖက် မှာ ဆို အပြေးလေးလျှောက်၊ သီချင်းသံ ရပ် မသွားပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်း မျှော်လင့် တမ်းတ ပြန်ရော ။ ရီရတယ် ။ လူတွေ က ၊ ကိုယ်နေရာ ယူဖို့အဆင်ပြေ နေတဲ့ အချိန် ကျ တမျိုး ၊ ဟော.. ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူး ။ အဆင်မသင့် တဲ့ နေရာဖက် ရောက်နေတဲ့အခါကျ နောက်တမျိုး ဖြစ်ချင်ပြန်ရော ...။
ခုလည်း ဆော့ကြဦးမယ် အကြီးအကျယ် ခုံဦးတမ်း ။ အဲ့ ဒီ ကစားပွဲ ကြီးကို လာမဲ့၂၀၁၀ မေလ မှာ
ကျင်းပကြမယ်တဲ့။ ကစားပြိုင်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းဖို့ တော့ လိုတယ်နော် ။ ခုတောင် ပွဲမဝင်ခင် ပြင်က ကျင်းပ နဲ့တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ် ပြင်နေကြသူတွေ ရှိနေပြီ ။ အဟင့် ငါ့ အဖေက အရင်က ဘာကောင်ကြီးကွ ၊ ငါ့ အဖိုး က ဘယ်လို အကောင်ကြီးတာ ကွ ဆို ပြီး စိန်နားကပ်ရောင် နဲ့ပါးပြောင်နေကျသူတွေလည်း မနည်းဘူးနော် ။ ပြီးတော့မှ သာ ပါးမပြောင်ဘဲ ဘာတွေ ပြောင်ကုန်ကြမလည်း သိချင်ပါသေးရဲ့။
အသေးစိတ် သိချင်ရင် ဒီမှာ ရှိပါလေ၏ ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါကုန် .....
အမြည်းလေးဘဲ ဆိုရင် ဒီလို ပါတဲ့ ....
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းများ၏ သမီးများ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပါတီထောင်
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးခေတ် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ၃ ဦး ၏ သမီးများက “ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ” အမည်ဖြင့် ပါတီတရပ် ဖွဲ့စည်းပြီး လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်မြသန်းသန်းနု၊ ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးဗဆွေ၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်နေရီဗဆွေ၊ ဒု ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးကျော်ငြိမ်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်ချိုချို ကျော်ငြိမ်း တို့သည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများအဖြစ် ဆောင်ရွက် ကြမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးသုဝေက
ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီအောက်မှာက နောက်တဂိုဏ်း .. Gangsters ကြီးများရဲ့ အရှင်သခင် Black Magic ဂိုဏ်းကြီးပါ ။ အသေးစိတ်က ဒီမှာ လေ..
စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့တော့မည်။
နေပြည်တော်ရှိ စစ်အစိုးရ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်၌ လက်ရှိ တက်ရောက်နေသော စစ်အရာရှိကြီး
၈၆ ဦးကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရွေးချယ် ထားကြောင်း သိရသည်။
သင်တန်းတက်ရောက်နေသော အဆိုပါ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိ ဗျူဟာမှူးကြီးများအပါအဝင် စစ်တပ်အတွင်း လက်ရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် စစ်အရာရှိကြီးများ စုစုပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ရန် ရွေးချယ်ထားသည်ဟု စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်း ကပြောသည် ။
စစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပါတီတခုအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး “အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပါတီ” ဟု အမည်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုပါတီတွင် ယခုလက်ရှိ စစ်တပ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အရာရှိကြီးများနှင့် လက်ရှိ ၀န်ကြီးဌာနများမှ နုတ် ထွက်မည့် ၀န်ကြီးများ၊ စစ်အစိုးရကျောထောက် နောက်ခံပြုထားသည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးအသင်း (ကြံ့ဖွံ့)နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့် ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် တချို့ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
ခုံ နေရာ ဦးတမ်းဆော့ရင်း နဲ့ နောက်ပိုင်းကျ တော့ နေရာလုပွဲ ကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ။ နောက်ဆုံး တခုံလေးကျန်နေတာ က အောက်မှာ ပြထားသလို ခုံမျိုး ဆိုရင်ရော .....
ဒီခုံလေးကို နေရာလုပြီးထိုင်မဲ့သူ ရှိ်ပါ့မလား လို့စဉ်းစားနေမိတယ် ဗျိုး.....
e တွေ ခေတ်စားနေတော့ ဒီ Electric Chair လေးတွေပေါ်မှာ ရော အညောင်းပြေ ထိုင်ကြည့်ကြပါဦးလား လို့.....
:kiki : at 9/17/2009 05:58:00 PM
ဒီနေ့ တော့ ဘာရယ်မဟုတ် ။ ဟိုရောက် ဒီရောက် ပေါက်ကရ အတွေးတွေ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ လျှောက်ရေး လိုက်တယ် ။ အိမ်ပြန်ချင်နေတဲ့ စိတ်တွေ ကြောင့် ပေါ့ ။ ပြန်ချင် ပြန်ပါလား လို့၊ လွယ်လွယ်လေးကို ခက်အောင်လုပ်နေရသလား လို့ပြောကြအုံးမယ် ။ အကြောင်း ကြောင်းတွေကြောင့် မပြန်ဖြစ်သေးတာ ။ နောက်တော့လည်း အကြောင်းကြောင်းတွေ ကြောင့် ပြန်ဖြစ်လာမှာပေါ့ ။ ထမင်းတလုပ်စားဖို့ လုပ်နေရတဲ့ သူတွေ ရှိသလို ခုံတနေရာ အတွက် လုပ်နေကြ ၊ လုနေကြတဲ့သူတွေ လည်းရှိတယ်လေ ။ ကိုယ်တို့ လို သာမန်လူ တွေ အတွက်ကတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းလေး နဲ့ထမင်းနပ်မှန်လောက် စားရရင်ဘဲ နေပျော်ပါတယ် လောကကြီးရယ်ပေါ့ ။ကျန်တာတွေက ဒီလောက် အရေးမကြီး လှပါဘူး ။ဒီတော့ ပါးစပ် ကလေး လှုပ်ရဖို့ အရေး ၊ ဝမ်းတထွာလေး ဖြည့်ဖို့ အရေး သမာအာဇီဝ အလုပ်လေးတွေ လုပ်နေကြရတယ် ။ အလုပ်တက် ၊ဆင်း အတွက် သွားလာကြရတယ် ။ပို့ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကားစီး ၊ရထားစီး ၊လေယာဉ်စီး ကြရတယ် ။လေယာဉ်ကတော့ လူတိုင်းနေ့ တိုင်းစီးနေကြတာ မဟုတ်တော့ ထဲ့ မပြောတော့ပါဘူး ။ခုံလည်းလုစရာ မလိုဘူးလေ။
ဘတ်စ်ကားစီး ၊ ရထားစီးပြီး အလုပ် အသွား အပြန်လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေ အကြောင်း ပြောရင်း ၊ထိုင်စရာ ခုံလုကြတာတွေ ၊တခါတလေလည်း ဘေးကနေ ကြည့်ရတဲ့သူတွေ အတွက်ရယ်စရာ လိုလို ဖြစ်နေတတ်တယ် ။ အားသွန်ခွန်စိုက် နေရာလုနေကြသူတွေကတော့ ဖင်တနေရာ ရစရာ အတွက် ဇောတွေကပ်နေကြတာနဲ့ခုံလုတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ဘယ်လောက်ရယ်စရာကောင်းနေကြမှန်း မသိလိုက်ကြဘူး ။(စောင်းပြောတာ .. စောင်းပြောတာ ) ။
ဒီမှာတင် တွေးကြည့် မိတာက ဖင်လေးတနေရာ စာ ခဏတာလေး ထိုင်ဖို့ခုံ လုကြတာဟာလည်း ကိုယ် နေ နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ၊ တိုးတက်မှု ၊(စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်မျိ်ုးလုံးပေါ့ ) ။နိုင်ငံ ကြီးသား ပီသမှု ၊ တွေအပေါ် အများကြီး ဆိုင်နေပါလား လို့ ပေါ့ ၊။ MRT ရထား တွေပေါ်မှာလည်း သင်္ကေတ တွေ အမျိုး မျိုး နဲ့ရေးပြထားတာတွေ ရှိပါတယ် ။ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ အိုသူ တွေ ။ ခြေလက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းတဲ့နာသူတွေ ။ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ နဲ့ ကလေးငယ်များ အတွက် ဦးစားပေး နေရာပေးဖို့နဲ့သူတို့ ထိုင်ဖို့ခုံကို သပ်သပ်ခွဲခြား ထားပေးကြတယ် ။ နိုင်ငံကြီးသားပီသ သူတွေ ဟာ ဒီလိုခုံမျိုးကို ဘယ်သူမှ လုမထိုင်ကြပါဘူး ။တကယ်လို့အလွန် ညောင်းနေလို့လွတ်နေတဲ့ ဒီလိုခုံမျိုး မှာ ဝင်ထိုင်မိတယ် ဆိုရင်တောင်မှ အထက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရင်းထဲ အကျုံးဝင်နေသူတွေ တက်လာတဲ့ အခါ အလိုက်တသိ နဲ့နေရာ ဖယ်ပေးတတ်ကြတယ် လေ ။
ကြုံဖူးကြမှာပေါ့ ။ တချို့ တလေဆို အဲလို priority seat နေရာမှာထိုင်ပြီး ပြန်ဖယ်မပေးချင်တာ နဲ့ အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတတ်ကြတာ ။ အတော်လေး အံ့ သြစရာကောင်းတယ် ။ (စောင်းပြောတာ .. စောင်းပြောနေတာ .. ဒို့ ရွှေပြည်က ဟိုလူကြီးတွေ ကိုလေ ။ )
အဲ့ လို အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ကောင်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ ရီစရာလေးတခု ကြားဖြတ်ပြောလိုက် အုံးမယ် ။ ဒီက ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ လည်း တချို့အန္တရာယ် ဖြစ်ဖို့ များတဲ့ ထိုင်ခုံ နေရာမျိုး မှာ seat belt တွေ ထားပေးတယ် ။ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ရှေ့ ခုံ တတန်း မရှိဖြစ်နေတဲ့ နောက်ဆုံး တန်းရဲ့အလယ်ခေါင်နေရာတို့။လူတက်ဆင်းလုပ်တဲ့နောက်ဖက် တံခါးနဲ့မျက်စောင်းထိုး ခုံနေရာတို့ မှာ ရှေ့ ကိုင်စရာ အတန်း မပါဘူး ။အဲ့ဒီတော့ ကားက ရုတ်တရက် ဘရိတ် အုပ်လိုက်တဲ့အခါကျ နယူတန်ရဲ့ရွေ့ လျားခြင်း သဘောအရ လူကအရှေ့ဟပ်ထိုး သွားတတ်တယ်။သဘောပေါက်တယ်ဟုတ် ။ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ရော ။
နေရာဖယ်ပေးရမှာ စိုးလို့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးစီးလာတဲ့ငနဲသား ၊ seat belt မပတ်ဘဲ လျှောတတ်တဲ့ခုံမှာ ထိုင်လိုက်လာတာ ၊ ဘရိတ် လည်း အုပ်ရော တခါတည်း လျှောပြီး ဖင်ထိုင်ရက် ပြုတ်ကျပါလေရော ။ အဟက် ။ ကောင်းလိုက်တာ ။ ဆေးရုံ ထဲ ကွတ ကွတ နဲ့ ဝင်လာတော့ အစကထင်တာ လိပ်ဂေါင်းများ ရှိသလား လို့ လေ ။ အကြောင်းစုံ သိမှ ရယ်ချင်စိတ်ကို မနဲ အောင့်ထားရတယ် ။ ဓါတ်မှန်လေး ရိုက်ကြည့်တော့ မှ ဒီသကောင့်သား မြီးညှောင့်ရိုး ကျိုးနေပါရော့လား ..... အရိုးကျိုးဖူးတဲ့သူတွေ သိမှာပေါ့ ။ ဘယ်လောက်နာသလည်း ဆိုတာလေ ။ အသွားမတော် တလှမ်း .. အကျ မတော် တညှောင့် လို့တောင် ပြော ရတော့မလိုပါဘဲ ။ တခြားအရိုး ။ခြေရိုး လက်ရိုး ကျိုးရင်တော့ ကျောက်ပတ်တီး စည်းတန်စည်း ။ ခွဲတန်ခွဲပေါ့ နော် ။ မြှီးညောင့်ရိုးကျိုးတာ ကတော့ ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး ။အဲ့ ဒီနေရာက ကျောက်ပတ်တီး စည်းလို့ လဲ မရတာကြီး ။ နာတာ ဘဲ ရှိတာပေါ့ ။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးလေး သောက်ရုံလောက်ပါဘဲ ။
ဪ ။။။ ခုံ လေး တနေရာ စာ အတွက် နဲ့အဆင်မသင့် မတော်တရော် ပြုတ်ကျ လို့မြှီးညှောင့်ရိုး ကျိုးရတဲ့အဖြစ် ။ ဒီထက် မြင့်တဲ့နေရာ က ပစ်စလက်ခတ် ပြုတ်ကျ တဲ့သူများ အတွက် တော့ ပို အထိနာကြ ပေလိမ့်မယ် ။ ကြောင်ကျ မကျ ပဲ ခွေးကျ ကျ တာမျိုး ဆိုရင် တော့ .... တွေးဆကာ ကြည့်ကြပါတော့ .... ( စောင်းပြော နေပြန် ပြီ ။ နဂိုတည်းက တဲ့ မနေတော့ ပြောလိုက်တိုင်း စောင်းနေတာကို ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါရန်....း)
ကဲ ... ကိုယ့် ခုံလေးတွေ မြဲအောင် ကိုင်ထားကြ ပါ ။
လှုပ်တော့ လှုပ်နေပါပြီ ။ ရှေ့ ရမ်း ၊ နောက်ရမ်းတွေလည်း သတိထားကြပါ ကုန် ။။
:kiki : at 9/16/2009 09:00:00 PM